Iindaba-Indima yokupakishwa kwempahla
Ngokubanzi, imveliso inokuba neephakeji ezininzi. Ingxowa yamazinyo equkethe intlama yamazinyo ihlala inebhokisi ngaphandle, kwaye ibhokisi yekhadibhodi kufuneka ibekwe ngaphandle kwebhokisi yezothutho nokuphatha. Ukupakisha kunye nokuprinta ngokubanzi kunemisebenzi emine eyahlukeneyo. Namhlanje, umhleli we-China Paper Net uya kukusa ukuba ufunde ngakumbi ngomxholo ofanelekileyo.
Ukupakisha kunemisebenzi emine:
(1) Le yeyona ndima ibalulekileyo. Ibhekisa ekukhuseleni iimpahla ezihlanganisiweyo emngciphekweni kunye nomonakalo onje ngokuvuza, inkunkuma, ubusela, ilahleko, ukusasazeka, ukukrexeza, ukuncipha, kunye nombala. Ngexesha lokusetyenziswa kwemveliso, amanyathelo okhuseleko abaluleke kakhulu. Ukuba ukupakisha akunako ukukhusela imixholo, olu hlobo lokupakisha aluphumelelanga.
(2) Bonelela ngokulula. Abavelisi, abathengisi, kunye nabathengi kufuneka bahambise iimveliso kwindawo enye ukuya kwenye. Intlama yamazinyo okanye iinzipho zinokuhanjiswa ngokulula kwindawo yokugcina izinto ngokuzifaka kwiibhokisi. Ukupakishwa okungahambi kakuhle kweekhence kunye nomgubo wokuhlamba kuye kwachaphazeleka kukuncinci okuTshintshwe ngokufakelwa; Ngeli xesha, kulula kakhulu ukuba abathengi bathenge kwaye bagoduke.
(3) Ukuchongwa, imodeli yemveliso, ubungakanani, uphawu kunye negama lomenzi okanye umthengisi kufuneka kuboniswe kupakisho. Ukupakisha kunokunceda abaphathi bendawo yokugcina izinto bafumane iimveliso ngokuchanekileyo, kwaye inokunceda abathengi ukuba bafumane into abayifunayo.
(4) Khuthaza ukuthengiswa kweempawu ezithile, ngakumbi kwiivenkile ezikhethwe nguwe. Kwivenkile, ukupakisha kutsala umdla wabathengi kwaye kunokuguqula umdla wakhe ube ngumdla. Abanye abantu bacinga ukuba “zonke ibhokisi zokupakisha zibhodi yezaziso. Ukupakisha okuhle kunokonyusa umtsalane wemveliso entsha, kwaye nexabiso layo sele linokukhuthaza abathengi ukuba bathenge imveliso ethile. Ukongeza, ukwandisa umtsalane wokupakisha kubiza ixabiso eliphantsi kunokunyusa ixabiso lemveliso.